Kusvira Janet WemaZigaro – Vanoda Zvinhu
Takasangana muWhatsApp group ndokubva tawirirana kusangana asi Janet akandipa warning akanditi “shaa ukuti unondida hako asi ukaona magaro angu unotiza” Ndakati aiwa handaitiza nekuti munda wegaro ndopangu chaipo. Takasangana paMachipisa muFio and for sure mwana iyeye aive neMaZiGARO.
Ndiko kukura kwanga kwakaita Janet. Ndakati zvishoma izvo ndokuenda naye kuka1 room kangu munaJabavu muya muFio. Tichingopinda ndakatanga nekubata magaro iwayo wanei ari very soft kunge cushion. Ndakabva ndati nawo pasina kumira ndokutanga kumukisser pahuro mwana wevanhu akatanga kuchemerera ini ndokutanga kubata mazamhu.
In no time hembe dzake dzanga dzave pasi iye ndamurarisa paBed. Ndakavhura drawer rangu remaCondom ndokutora maStudded ones ndokupfeka. Mwana aive nekanyini kadiki kaive mukati memunda wemagaro.
Ndakapfeka condom fast and in seconds ndakanzwa Janet ochemerera ndapfekedzera zimboro mukati. Handina kumira ndakasvira kusvika mwana wevanhu atunda heavy. Ndakamurova nayo 15 more minutes ndokuzotunda. Ndakabvisa Condom ndokupfeka hembe ndokugara paBed ndokutanga kutaura. Ipapo ndopandakaziva kuti i was in love naJanet WemaZIGARO.
Good Girl Gone Bad, ndakarova Dhobho kwakukazhagadzwa naRasta vekuMufombi
Next story Kusvira Hure muNight Club Tipperarys – Short Story.
Previous story Dzesviro:Nyoro zvedu paya nemukadzi wemunhu